မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ | Danya Wadi
Browsing: » Home »ဥပဒေ»မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ	Leaveacomment
မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ	Posted by danyawadi on November 3, 2016 in ဥပဒေ, ဆောင်းပါးများ, General	နိုဝင်ဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၆
ခင်မောင်ချို (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ) ရေးသည်။
ကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုအခင်းအတွေ့ကြုံ များအရ ဥပဒေ အသိပညာ များကို ဝေငှလိုက် ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်များကို လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ခန့် လောက်ကစပြီး တရားဝင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်း ၁၉၄၉ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေနဲ့ ၁၉၅၁ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေများကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကိစ္စရပ်များ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပြဌာန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီဥပဒေ အမည်များကဖော်ပြလျက်ရှိပါ တယ်။ ယခုအခါ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်များ ထုတ် ပေးခြင်းမရှိသော်လည်း အဲ့ဒီဥပဒေများကို မပယ်ဖျက်ဘဲ၊ယခုတိုင် တည်ဆဲဥပဒေများဖြစ်နေ ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ဥပဒေများကို ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ စတင်ပြီးပြန်လည်အသက်သွင်းလာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။
အစောဆုံးတွေ့ရှိရတာကတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ ဝှိုက်ကတ် (White Card) များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးဖို့ဖွဲ့စည်းတဲ့ ” ယာယီကတ်ပြားများ ကိုင်ဆောင်သူများ လေ့လာစိစစ် သုံးသပ်ရေး အကြံပေးကော်မတီ” ရဲ့ထောက်ခံချက်အရ ဝှိုက်ကတ် ယာယီ ကတ်ပြားများ အပ်နှံသူများကို NVC အစိမ်းရောင် ယာယီကတ်ပြားထုတ်ပေးရန် ၁၉၄၉ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင် သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ -၄( ၂) အရ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
နောက်ထပ်တွေ့ ရှိလာတာကတော့ (၃၁.၃.၂၀၁၅) မှာ ရပ်စဲလိုက်တဲ့ ဝှိုက်ကတ်များ ဆက်လက် ကိုင်ဆောင်ထား သူများ၊ နိုင်ငံသား ကတ်ပြား လက်ဝယ်မရှိသူများ၊ နိုင်/ကတ်လျှောက်ထားဆဲများ၊ နိုင်/ကတ် မလျှောက်ရသေးသူများ ကိုလည်း ၁၉၄၉ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းနေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ ( ၂ ) ၆ ( ၃ ) အရအမှုများ စွဲဆို တင်ပို့လာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပုဒ်မ ၆ ( ၂ ) နဲ့အရေးယူနိုင်ရန် ၁၉၅၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်လျင် အရေးယူနိုင်တဲ့ပုဒ်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၆ ( ၃ ) ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ပုဒ်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်( ၂ )နှစ်အထိ နဲ့ငွေဒဏ်ချ မှတ် နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ၁၉၅၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများ နည်းဥပဒေများ ပတ်သက် ပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ ပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆ ၊၂၈ တို့ကို အခြေခံပြီး အမှုခွဲများ စွဲဆိုလာတာကိုတွေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီဥပဒေတွေက အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဌာန်းခဲ့တာဖြစ်တော့ အမှန်တကယ်တော့ အမှုရင်ဆိုင် ရင် လွတ်မြောက်ရာ လွတ်မြောက်ကြောင်း နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုတင်ပြီး ကာကွယ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ ရပ်/ ကျေး ထောက်ခံ ချက်များပြသရင်လည်း မလုံလောက်တော့ပါ။ ရပ်/ ကျေး ထောက်ခံချက်များပြသနိုင်သော် လည်း မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မပြနိုင်ရင် အဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့ တရားစွဲ ဆိုတော့ပါဘဲ။
အဲ့ဒီတော့ အဲဒီဥပဒေ အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မငြိစွန်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းလမ်း ကတော့ မိမိနေထိုင်/ တည်းခိုတဲ့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လ.ဝ.က ရုံးသို့ အကြောင်းကြားထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ် လ.ဝ.က အရာရှိ ထံလိပ်မူပြီး မိမိရဲ့ နိုင်ငံသားလျှောက်ထားမှုအခြေအနေ ကို အကျဉ်းဖော်ပြပြီး မိမိသည် မည်သည့် လိပ်စာ တွင်နေထိုင် /တည်းခို နေကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြားထား ကြောင်း အထောက်အထားရယူထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။
သို့သော် ဥပဒေက မည်သို့စေကာမူ ….
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက် ဧည့်စာရင်းလည်းပြ နိုင်တယ်။ နိုင်/ကတ် လည်းပြနိုင် တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမလည်း အဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူ ခံထားရလို့ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ….
ခင်မောင်ချို (ခေတ္တ ဘန်ကောက် )
← ရိုဟင်​ဂျာ စကားနှင့်​ ဘင်္ဂါလီ စကားကွဲပြား ခြားနားခြင်း Different of Rohingya and Bengali Langusge	ပြည်သူ့ရဲ ဆိုသူများက “လဝက ” ဌာနမှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ဘာကြောင့် အသိအမှတ် မပြုရတာလဲ? →